About Us - U-Huai 'An Hongyu Medical Equipment Co, Ltd.
I-Hongyu Medical ikhwalithi yokulawula Umnyango umiselwe ukuthi uhlole ngokuqinile ikhwalithi yamathuluzi ngamunye, kufaka phakathi ukubukeka, osayizi, ukunemba, nephakheji. Konke ukuhlolwa kufanele kuhambisane nezwe nezinga elingaphakathi, futhi nesidingo esikhethekile samakhasimende. Ikakhulu ngesidingo esikhethekile sama-oda wamakhasimende, abasebenzi abalawula ikhwalithi bahlala bethatha imininingwane ethe xaxa, ukuze bahlangabezane nezidingo zamakhasimende ngokuphelele.Le ndlela ithuluzi ngalinye elivela eHongyu Medical Design lihlala lilindelwe amakhasimende ethu ngokulawula ikhwalithi ephezulu. kuzobhekwa njengokubaluleke kakhulu kithina, njengomakhi we-OEM / ODM ochwepheshe eChina.
I-KPI Yokulawula Ikhwalithi (Inkomba Eyisisekelo Yokusebenza):
1.Umthombo. Izinto zokwenziwa zeHongyu Medical Equipment kumele zihambisane ne-GB / T1220-2007 ejwayelekile kanye ne-GB / T3620.1-2016.
2.Sies ukubekezelelana. Ukubekezelelwa kosayizi bezinsimbi zeHongyu Medical kufanele kube ngaphansi kokubekezelela okukhonjiswe kwimidwebo evamile.
3. Ubushelelezi obungaphezulu. Ubushelelezi bobuso bazo zonke izinsimbi zeHongyu Medical kumele zingaphansi kuka-0.8µm.ukubukeka kumele kuqinisekiswe.
Ukuhlolwa kweHardness.Ukuhlolwa kumele kusetshenziswe ngokuya nge-GB / T230.1-201 ejwayelekile.
5.Anti-corrosion test.Ukuhlolwa kwamanzi abilayo kuhlala kusetshenziswa ngokuya nge-YY / T 0149-200 ejwayelekile
Njengoba sazi, ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kuyisisekelo sezinto ezisezingeni eliphakeme. I-Hongyu Medical ihlala ithathela yonke imininingwane yemikhiqizo namakhasimende aqinisekisiwe wemishini efanele yezokwelapha.
Isevisi ye-Hongyu Medical After-Sales
I-Huai'an City Hongyu Medical Devices Co, Ltd. ngokuhambisana nomgomo "wodumo kuqala, ubuqotho kuqala", yenza izibopho zenkonzo elandelayo:
1.Ukunikeza insiza yolwazi yamahhala, ukusekelwa kwezobuchwepheshe;
2. I-Warranty Service enikeziwe.Ngokunikwa iwaranti, lapho izinkinga zenzeke ngeshwa ngekhwalithi yezinsimbi zethu ngenxa yomonakalo ongewona owabantu, izinsimbi zazizobuyiselwa mahhala mahhala;
3. Ukuphendula kungakapheli amahora angama-24 uma ngabe kukhona uphenyo. Noma yisiphi isicelo sakho sizokwamukelwa kungakapheli amahora angama-24 uma usithumela isicelo sakho kusayithi lethu.
Isikhathi se-4.Fast Yokulethwa. Njengokujwayelekile, i-oda lakho lesampula lizothunyelwa kungakapheli amahora angama-48.
5. Silandele futhi ushiye umyalezo nganoma yisiphi isikhathi: